OCEANIA | RayHaber | Railway | Highway | telegrama fiara
Melbourne, renivohitry ny fanjakan'i Victoria, izay mikendry ny hampitombo ny tanjaky ny angovo azo havaozin'ny 50 isan-jato, dia miasa ny tamba-jotra manontolo amin'ny tanàna miaraka amin'ny angovo azo avy amin'ny masoandro. Melbourne, ilay tanàna lehibe faharoa lehibe indrindra ao Aostralia, no hampandeha ny tambajotra tramn'ny tanàna manontolo miaraka amin'ny herin'ny masoandro [More ...]
Tany Aostralia, ny orinasa iray mpitrandraka harena an-kibon'ny tany, Rio Tinto, dia nanangana ny tambazotran'ny lalamby manara-penitra tanteraka miaraka amin'ny robot lamasinina lehibe indrindra eran-tany. Ny seranam-piaramanidina fitaterana an-dalamby ao Pilbara, Andrefan'i Aostralia, dia manana lava eo amin'ny 800 kilometatra. lamasinina, [More ...]
Voarara ny fiaran-dalamby tsy misy entana izay nialokaloka tao Devonport, Tasmania, Aostralia, ary nisy ny fisian'ny loza mety hitranga. Araka ny fanambaràn'ny polisy Tasmaniana, ny fiaran-dalamby tsy voafehy tsy misy fepetra izay tsy voafehy dia nesorina tany akaikin'i Devonport Harbour. [More ...]
Ireo mpandeha 16 any Aostralia dia naratra noho ny fidarabohana tao anaty sakana mba hampiato ny fiantsonan'ny fiaran-dalamby manakaiky ny fiantsonan'i Richmond any avaratrandrefan'i Sydney. Ny Polisim-panjakana New South Wales (NSW), izay nanao fanambarana momba ny loza, dia naratra kely noho ny mpandeha 16. [More ...]
Ny lamasinina voalohany manerantany amin'ny masoandro dia manomboka
Ny lamasinina voalohany manerinerina amin'ny alàlan'ny masoandro dia nanomboka ny kilometatra 3 ao Aostralia. Ny orinasan-dalambin'i Byron Bay dia nanomboka nampiasa ny lamasinina voalohany manerantany solosaina tany Aostralia. Fiaran-dalamby voalohany manerantany [More ...]
Ny fiarandalamby voalohany manerantany tsy misy mpanamory fiara manomboka ny fandefasana entana: Ny orinasam-pitrandrahana harena an-kibon'ny tany Rio Tinto dia nanomboka nampiasa ny fiaran-dalamby voalohany nirohotra nanerana an'izao tontolo izao. Ny orinasa dia andrasana hiditra amin'ny sehatra samihafa miaraka amin'ity sehatra ivelan'ny sehatry ny harena ankibon'ny tany ity. fiaran-dalamby [More ...]
ny United States avy any Dayton, Ohio dia nanampy, nanondro ny fotoana miavaka ho an'ny Moovit sy manaporofo fa izany no hany fampiharana tokony hitaterana manerana izao tontolo izao amin'izao fotoana izao ny fanambarana fa izao tontolo izao no malaza indrindra fitaterana fampiharana Moovit ny xnumx'ünc nanampy ny tanàna [More ...]
Ny fiarandalamby izay manome ny ankizy handeha ho any an-tsekoly isaky ny maraina: Matetika ireo zavatra izay mitondra fahasambarana marina dia vokatry ny zavatra madinidinika toy izany. Ny vondrom-piarahamonin'ny Punmu mipetraka any Andrefan'i Aostralia dia tsy manaiky ny handeha any an-tsekoly amin'ny fanaovana lamasinina avy amin'ny barika. [More ...]
29 tratra tany Aostralia Nifandona ny Tram sy kamiao: Tao Melbourne, Aostralia, dia naratra ny 29 noho ny fifandonana tamin'ny fiara sy kamiao. Nitranga tamin'ny fotoana XnumX teo an-toerana ny fiampangàna teo amin'ny fiampitana teo akaikin'ny Melbourne Zoo. Mpitaingina fiara mpamonjy voina [More ...]
Ilay zazalahy kely dia tonga teo anelanelan'ny fiaran-dalamby sy ny Peron: Tao amin'ny gara Cronulla tao Sydney, ilay zazalahy kely dia nijanona teo anelanelan'ny lampihazo sy ny lamasinina. Kamerà fandriam-pahalemana miseho ivelany. Araka ny vaovao azo, dia nitranga tao amin'ny gara Cronulla tao Sydney, Australie ity tranga ity [More ...]
Aostralia, 40 miala tsiny noho ny loza voajanahan'i Granville teo aloha: Ny Fanjakan'i New South Wales (NSW) 40 dia hiala tsiny amin'ny fianakaviana izay namoy ny havan-tiany tao amin'ny lozam-piaramanidin'i Granville taorian'ny taona maro. Ny fiara mpitatitra 18 tamin'ity tranga mampalahelo ity tamin'ny Janoary 1977 [More ...]
TCDD no nampiantrano ny delegasiona Aostraliana: Nisy fivoriana natao tao Ankara Gar Kule Restoran Behiç Erkin Hall teo amin'ireo solontenan'ny TCDD sy orinasa miasa ao amin'ny sehatra fitaterana an-dalamby any Aotrisy. Masoivohon'ny Repoblika Federalin'i Aotrisy Klaus Wölfer, tale jeneralin'ny TCDD [More ...]
Tetik'asa iray hanamoràna ny fitaterana any amin'ny seranam-piaramanidin'i Perth any Aostralia: fanatontosana rohy lalamby vaovao mampifandray an'i Forrestfield amin'ny seranam-piaramanidin'i Perth. Ny asa lehibe ao amin'ny tsipika izay hahamora kokoa ny mandeha any amin'ny seranam-piaramanidina Salini Impregilo [More ...]
Bombardier Trains Tonga Aostralia
Bombardier Trains Tonga tany Aostralia: Tonga teto Brisbane, Aostralia ny Bombardier voalohany fiarandalamby ho an'ny Australian Railways, 16 tamin'ny Febroary. Ny serivisy hanompo any amin'ny faritra ambanivohitr'i Aostralia Atsimo-Atsinanan'i 75 sy 6 dia natao tamin'ny sahan'ny lalamby. Bombardier, [More ...]
New Metro Line mankany Canberra renivohitra Aostralia
Lalana Metro vaovao mankany an-drenivohitr'i Aostralia, Canberra: Ny ampahany voalohany amin'ny rafi-dalavaly lamasinina renivohitra Aostraliana dia nosoniavina niaraka tamin'ny consortium an'ny orinasa isan-karazany. Orinasa ao amin'ny consortium noforonina ho an'ny lalamby lamasinina Canberra John Holland, Mitsubishi [More ...]
Fiaramanidina solifara asidra
Nentina ny lamasinina nitondra asidra solifara: tany Aostralia dia nisy toe-java-niseho iray nateraka tany amin'ny faritra 200 kilometatra noho ny fihoaram-peon'ny fiarandalamby sulfurika 2 arivo litatra. Avaratr'i Queensland, any Aostralia, ny asidra solifara 200 arivo litatra [More ...]
Fahafatesana - tolona ho an'ny lalamby (Video)
Ny tolona ho an'ny fahafatesana sy ny fahafatesana eo amin'ny lalamby: Ny zava-nitranga dia nitranga tao amin'ny gara iray any Aostralia ary nentina tao am-pon'ny fo ny hita tao amin'ny fakantsary fiarovana. Tao amin'ny fiantsonan'ny Flemington, dia nisy ankizivavy kely nanandrana nitondra ilay kilalao nilatsaka teny an-dalàny ka saika teo ambanin'ny lamasinina. Tonga ny lamasinina tonga [More ...]
Fitokonan'ny fiarandalamby any Melbourne
Tao Melbourne, Fitokonan'ireo mpandeha an-dalamby: Nitaky fitokonana nandritra ny roa andro ny sendikan'ny mpiasa an-dalamby Melbourne. Ireo manam-pahaizana, ny fitokonana roa andro momba ny fiaran-dalan'ny tanàna lehibe amin'ny fitaterana ny tanàna, dia nilaza fa ny tsy fahampian'ny fifamoivoizana. Railway Tram sy Bus Union, RTBU [More ...]
Ireo traikefa an'i Sydney izay nosoniavina ny fifanarahana fampandehanana: Misy fifanarahana vaovao nofehezin'ny fanavaozana ny fiaran-dalan'ny faritra atsimon'i Aostralia. Ny fifanintsanana tapitrisa 96 tapitrisa dolara dia nanao sonia teo anelanelan'ny UGL Uniport Rail sy ny talen'ny fitateram-pitaterana an-dalamby aostralianina. Fanavaozana ny fiaran-dalamby UGL% 70 [More ...]
AusRail 2014 fihaonam-be sy ny fampiratiana
Ny XRUMX-10 11 2014 dia hotontosaina any Perth, Australie. Ny tranonkalan'ny lamasinina lehibe indrindra any amin'ny kontinanta Aostraliana dia atao isan-taona any amin'ireo tanàna samihafa. Miasa any Aostralia [More ...]